QAYLODHAAN KA TIMID ISBITAAL BANAADIR❗️xildhibaan mahad salad – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA QAYLODHAAN KA TIMID ISBITAAL BANAADIR❗️xildhibaan mahad salad
QAYLODHAAN KA TIMID ISBITAAL BANAADIR❗️xildhibaan mahad salad
Qof ka shaqeeya Isbitaal Banaadir ayaa xogtaan xalay ii soo diray. Isla markiiba waxaan la wadaagay madaxda sare qaarkood, waanan rajeynayaa in si degdeg ah looga howlgalo. Hadii sidaan wax u dhaceen dalkaan waxaa ku soo socda dhibaato aad u culus ee fadlan hurdada halaga kaco❗️
Salaan kadib, waxaan rabaa inaan kula wadaago xaladda uu marayo Caabuqa Covid 19, marxaladaha uu soo maray bukaankii u geeriyooday cudurkaan iyo sida ay wax u dhaceen:
Waxaa dhacday 2dii bishaan Abriil in Shariif Maxamed Maxamuud laga qaaday xaako (sputum) si loo baaro, waxaana la keenay Isbitaal Banaadir qaybtiisa TB da, dhakhtarka TB da maamula ayaa ka soo qaaday oo keenay shaybaarka si looga baaro TB, waana laga waayay. Intaas kadib waxaa loo wareejiyay Isbitaalka Aadan Cadde, maalin walba waxaa aadayay qaar ka mid ah dhakhaatiirta iyo shaqaalaha isbitaalka waayo waxuu ahaa Aabaha agaasimaheenna Isbitaal Banaadir iyada ayaana ku ixtiraamaynay. galabnimadii Talaado ah 7dii bishii Abriil waxaan isbitaalka ugu tagay ku dhawaad 27 ka mid howlwadeenada isbitaalka oo ay ku jiraan 8 dhakhaatiir ah.
Kadib markii la ogaaday in agaasime Fartuun Shariif Aabaheed qabo cudurka Covid 19 waa laga bixiyay Isbitaalka waxaana la geeyay Isbitaal Martiini oo galabnimadii Arbacada uu ku geeriyooday Allaha u naxariisto. Dhakhtarkii ka qaaday xaakada (sputum) iyo agaasimaha iyo hal qof oo kale kaliya ayaa karantiil la geliyay si loo hubsado badqabkooda❗️
Arinta cabsida leh ayaa ah wali Isbitaalka wuxuu wadaa shaqadiisii caadiga ahayd iyadoo ay joogaan in ka badan 50 qofood oo isugu jira dhakhaatiir iyo howlwadeeno caafimaad oo u tagay bukaanka u geeriyooday cudurkaan. Qaar ka mid ah howlwadeenadaas maanta ma imaanin Isbitaalka waxayna noo sheegeen in ay dareemayaan qandho iyo dhuun xanuun. Halista ugu wayn ayaa ah in uu ku sii faafayo cudurkaan bukaanada isbitaalka jiifa, shaqaalaha ka shaqeeya, hooyoyinka iyo caruurta isbitaalka u yimaada baaritaano caafimaad. Si looga badbaado cudurkaan in uu sii faafo waxaan kaa codsan lahaa in la sameeyo baritaano degdeg ah. Waa arin laga gaabinayo, sababtoo ah Wasaarada Caafimaadka 10 jeer ka badan ayaan wacnay wax taleefoon kaa qabanayana malahan. Farintaan adiga ayaan kula wadaagay. Howlwadeenada, dhakhaatiirta iyo bukaanada jiifa iyo kuwa yimid isbitaal Banaadir waxay u bahanyihiin baaritaano degdeg ah.
Previous articleMaalin Keliya Ayay Maalqabeen Wada Noqdeen
Next articleKorneyl IToobiyaan ah oo dhameystey 14 cisho kaaritimaanka somaliland oo ka hadley
DEG DEG:-Qarax Gaari Oo Ka Dhacay Magaalada Muqdisho
Saynisyahano ku sugan Australia ayaa sheegay inay heleen daawo 48hours...